Hector Herrera oo go’aasaday kooxda uu biirayo… (Miyuu aadayaa Spain mise waxa uu ku sii jeedaa Italy?) – Gool FM
(Porto) 19 Maarso 2019. Xiddiga kooxda FC Porto ee Hector Herrera ayaa la soo warinayaa inuu go’aansaday kooxdii uu ku biiri lahaa iyo horyaalkii uu u dhaqaaqi lahaa waxaana la sheegayaa inuu aadi doono dalka Spain.
Kooxda Atletico Madrid ayaa shaaca laga qaaday inay tahay kooxda ku guuleysatay tartanka loogu jiray saxiixa laacibkan khadka dhexe ee FC Porto, Hector Herrera.
Xiddiga xulka qaranka Mexico ayaa haatan ku jira xilli ciyaareedkiisii lixaad ee kooxda reer Portugal, laakiin 28-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga.
Wararku waxa ay soo jeedinayaan in Herrera uu diyaar u yahay tartan cusub, iyadoo kooxaha reer Talyaani ee Inter Milan, AC Milan iyo AS Roma dhammaantood la la xiriirinayay ciyaaryahankan.
Yeelkeede, sida uu warinayo Warsidaha O Jogo, Herrera ayaa go’aansaday inuu u dhaqaaqo kooxda Atletico Madrid si uu uga hoos shaqeeyo tababare Diego Simeone.
Macallinka reer Argentine ayaa qeyb wayn ka ciyaari kara soo iibsiga xiddigan oo jecel inuu la shaqeeyo, halka kooxda Atletico ay diyaar u tahay inay ciyaaryahan Herrera u gacan galiso heshiis shan sanadood ah.
Wararku wax ay intaa ku darayaan in wadahadallada la filayo in la soo gabagabeeyo bilaha soo socda.
Virgil van Dijk: "Goolasha Mohamed Salah ee Liverpool waa ay imaan doonaan"